Cabdi Ilay oo Madaxweyne Maqaarsaar ah Xilka u Dhiibtay - WardheerNews
Cabdi Ilay oo Madaxweyne Maqaarsaar ah Xilka u Dhiibtay
Cabdi Ilay iyo madaxweynaha cusub Axmed Cabdi
Wararka laga helayo magaalada Jigjiga ee caasimadda Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in guddida fulinta ee xisbiga ka arrimaiya Deegaanka soomaalidu ay u magacaabeen Axmed Cabdi Maxamed oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda in uu noqdo madaxweynaha cusub deegaanka Soomaalida.
Madaxweynihii hore Cabdi ilay ayaa la sheegay in uu isagu weli sii ahaan doono guddooomiyaha Xisbiga talada haya ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya oo ah xisbiga keliya ee ka jira deegaanka.
Isbeddelkan ayaa u muuqda mid lagaga hortagayo in dawladda dhexe oo caddaadis weyni kaga imanayay Ina Ilay ay shakhsi iyadu wadato lagu bedelo Cabdi Ilay, taasi oo keeni karta in lagula xisaabtamo dambiyadii faraha badnaa ee uu ka galay shacabka Soomaaliyeed ee uu taladooda ku amarkutaaglayn jiray.
Dadka siyaasadda deegaanka u dhuun daloola ayaa aaminsan in inkastoo uu wareejiyay xilkii haddana ay awoodda iyo talada deegaanku noqon doonto mid weli isaga ka go’da, amarraduna xaggiisa ka soo fuli doonaan. Madaxweynaha cusub oo ka mid ahaa adeegayaashii Cabdi Ilay waxa uu noqon doonaa uun mid xilka ku magacaaban oo maqaarsaar ah.
Cabdi Ilay oo tobankii sanno ee ugu dambeysay si aad ah uga dhex muuqday talada deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxba kamajiraan ka dhigay dastuurkii iyo sharcigii deegaanka isagoo islamarkaana nidaam boqortooyo oo isaga iyo reerkoodu ka taliyaan ka hirgeliyay magaalada Jigjiga.
Dawladda Federaalka iyo Shacabka Deegaanka ee isbeddel doonka ahaa ayaanay weli caddayn sida ay uga jawaabi doonaan arrimahan cusub ee ku soo kordhay deegaanka.